Wondershare Ọgwụgwụ ọrụ License Agreement
Ọgwụgwụ ọrụ License Agreement
Nke a bụ iwu nkwekọrịta n'etiti unu, ọgwụgwụ onye ọrụ, na Wondershare Software Co., Ltd. na enyemaka Wondershare Software (HK) Co., Ltd., Mmepụta nke usoro ihe omume ("Wondershare"), Mmepụta nke usoro ihe omume ("Wondershare"), banyere ojiji nke Wondershare ngwaahịa ("Software"). Site na ị wụnye Software, ị na-ekweta-agbụ site usoro nke a nkwekọrịta.
1. Onyinye nke ikike
Wondershare ugbu n'emere gị (onye) na revocable, onye, ​​na-abụghị nanị, na nontransferable ikike wụnye ma rụọ ọrụ Software na abụọ iche kọmputa naanị maka onwe gị na ndị na-abụghị azụmahịa were, ọ gwụla ma ị zụrụ a azụmahịa akwụkwọ ikike site n'aka Wondershare. Ịkekọrịta a Software na ndị ọzọ, ma ọ bụ ikwe ọzọ na ihe ndị na-ele ọdịnaya nke a Software, bụ mebiri nke a ikike. Nwere ike ị gaghị eme ka Software dị na a netwọk, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na-enye Software ka otutu ọrụ, ọ bụrụ na i mbụ zụrụ dịkarịa ala a multi-ọrụ akwụkwọ ikike site n'aka Wondershare.
The Software na-ekesịpde site Wondershare na-echebe site nwebisiinka iwu na mba nwebisiinka nkwekọrịta. Ị nwere ike iwepu ma ọ bụ izochi ọ bụla proprietary ọkwa, kpọọ ma ọ bụ akara si Software.
3. Mmachibido na Jiri
nwere ike ị gaghị, na i nwere ike Enyeghị ndị ọzọ na-(a) agbara engineer, decompile, itapia, decrypt, ebukọtala, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na-erite isi koodu si, na Software; (b) gbanwee, kesaa, ma ọ bụ mepụta emepụta ọrụ nke Software; (c) oyiri (ọzọ karịrị otu azụ-elu oyiri), kesaa, n'ihu ọha na-egosipụta, ebunye, na-ere, mgbazinye, mgbazinye ma ọ bụ n'ụzọ na-erigbu ndị Software.
4. IKPAEDEM CD.
The mmeputakwa na nkesa nke Wondershare Software (nwale oyiri naanị) dị iche iche Cover CD bipụtara Associated magazin na-ekwe. Otú ọ dị ka oyiri nke magazine na CD a chọrọ na-eziga Wondershare Software.
a License bụ irè ruo mgbe kwụsị. Ị nwere ike kwụsị ya n'oge ọ bụla na site n'ibibi ndị Software, na ndị niile mbipụta ya. Nke a License ga-chupu ma ọ bụrụ na ị na-ada ime na ihe ọ bụla okwu ma ọ bụ ọnọdụ nke a Agreement. Dị otú ahụ nchupu, ị na-ekweta ibibi Software, na ndị niile mbipụta ya.
6. Mba ndị ọzọ na warranties.
WONDERSHARE software adịghị akwukwo ikpe na software njehie FREE. WONDERSHARE SOFTWARE disclaims ndị ọzọ nile warranties na-akwanyere software, ma awara awara ma ọ bụ echiche, gụnyere ma na ọnweghị oke echiche warranties OF MERCHANTABILITY, Mma maka otu nzube na NONINFRINGEMENT OF ọzọ ikike. ỤFỌDỤ meworonụ Ekwela ka mwepu OF echiche warranties ma ọ bụ erughị NA otú oge AN echiche WARANTII pụrụ ịdịru, ma ọ bụ mwepu MA Ọ BỤ mmachi nke a na-enwe MA Ọ BỤ ndị dị emebi, otú ahụ n'elu ndị na-agaghị emeli MA Ọ BỤ exclusions ghara emetụta unu. A WARANTII na-enye gị kpọmkwem ikike iwu Ị pụkwara ọzọ Rights OLEE ịdị iche iche site ikike TO ikike.
Na omume nke invalidity nke ọ bụla ndokwa nke a ikike, ndị ọzọ na-ekweta na ndị dị otú ahụ invalidity ga adịghị emetụta ndaba nke fọdụrụ akụkụ ụfọdụ nke a ikike.
8. NO Ibu maka ndị dị emebi.
NA NO Omume ga WONDERSHARE software ma ọ bụ Suppliers-atụba ya na unu maka ihe ọ bụla ndị dị, pụrụ iche, a na-enwe ma ọ bụ anọ na-emebi nke ụdị ọ bụla ịda nke nnyefe, arụmọrụ ma ọ bụ jiri nke software, ọbụna ma ọ bụrụ WONDERSHARE software gwara OF-ekwe omume ndị dị otú ahụ na-emebi. IN NO omume ga WONDERSHARE SOFTWARE ibu ọ bụla na-ekwu, ma nkwekọrịta, tort MA Ọ BỤ ihe ọ bụla ọzọ tiori ibu, gafere Ikikere ego kwụrụ unu, Ọ bụrụ na.
Nkweta site na wụnye software, Ị na-ekweta na unu nwere ịgụ na ịghọta Bute aga nakwa na ị na-ekweta-agbụ ya usoro na ọnọdụ. Ị na-ekweta na A nkwekọrịta bụ The Complete na nanị Nkwupụta nke nkwekọrịta n'etiti ọzọ na SUPERSEDES nile a tụrụ ma tupu nkwekọrịta, onu MA Ọ BỤ dere, na ihe ọ bụla na nkwukọrịta ndị ọzọ n'etiti ndị ọzọ metụtara ndị ikike kọwara n'ime ebe a.